Samii haaraa fi laftii haaraan maaliidhaa?
Namoonni baay’een hubannoo dogogoraa qabu, mootummaan Waaqayyoo amansiisaatti maal akka fakkaatu. Mul’ata boqonnaa 21-22 waa’ee samii haaraa fi lafa haaraa tarreefama fakkii nuuf laata. Tibbawwan bara dhumaa booda, samii fi laftii ammaa ni darbu lafa haaraa fi samii haaraadhaan bakka buufamu. Bakki mana bara baraa amantootaa lafa haaraa ta’a. lafti haaraanis “Mootummaa Waaqayyoo” ni ta’a, innis kan bara barummaa kan ittiin dabarru. Lafatti haaraa irratti, Yerusaaleem ishee haaraan magaalaa ishee samii irra, kan ittiin taatu. Lafatti ishee haaraa irratti, balbala dhagaa gati jabeessaa fi waltajjiwwan warqee kan isaan ta’an.
Samii__ lafa haara__bakka qaamaati, kan ulfeefamaan qaama foonii wajjin kan jiraannuu (1Qor. 15:35-58). Mootummaa Waaqayyo “duumessawwan keessa” kan jedhu yaad-rimeen kitaaba qulqulluu keessa hin jiru. Nus “hafuuroota taanee samii irra in bololina” kan jedhu yaad-rimeen kitaaba qulqulluu keessa hin jiru. Amantootni kan isaan baratan mootummaan Waaqayyoo haaraa fi guutuu kan ta’ee pilaaneeti dha, achis kan nu jiraannu. Lafti haaraan cubbuu irraa, hamenya irraa, dhukkuba irraa, rakkina irraa fi du’a irraa bilisa ni ta’a. innis kan ammaa lafa keenyaa wajjin wal fakkaataa ta’uu danda’a, yookaan tarii kayyoon keenya ammaa uumama haaraa, ta’us garuu abarsa cubbuu kan hin qabne.
Waa’ee samii haarahoo? Yaadatamuun kan irra jiru wanti faayidaa qabu, “samiin” kan isaan argisiisan hawwaa oliidha, irraa hafees bakka bulti. Kanaaf, hawwaa keessanii haaraa. Innis kan inni fakkaatu samiin Waaqayyo irra deebiin akka uumamuu dha, Universi irra waan jiru hundumaa (jalqabbi haaraa” gochuudhaaf, fooninis ta’e hafuuraan. Nu samiwwan haaraa wajjin walitti dhufiinsa dhi’oo qabaannaa? Ta’u danda’a, ta’us garuu argachuudhaaf eeguutu nurra jiraata. Hundumti keenya dubbii Waaqayyoof eyyamuutu nurra jiraata, waa’ee mootummaa Waaqayyoo wanta qabnu hubachuuf sammutti qabachuu.